Ụbọchị My Pet » Online dịwara Inweta Ị Down?
emelitere ikpeazụ: Jan. 22 2021 | 3 min agụ
Ị mara otú ọ dị mgbe ị zitere na narị zaghị e-mail, na mara mma nwoke / nwaanyị na ị na-akparị ụka ka tụgharịa si na-lụrụ di na nwunye, na onye ị n'ezie mmasị emi okụrede enweghị a okwu na onye ị zutere ndị na-urua ga gwa foto na-bụ dịkarịa ala afọ iri n'ihi na ọ bụghị anya ihe ọ bụla dị ka ya na anụ ahụ! Ọ nwere ike ịdị mma disheartening.
Ọ bụghị na ị pụtara ịbụ snobby, na eziokwu bụ na o nwere ike na-eche dị ka onye ọ bụla ị na-ezute online a na ma na-egwu egwuregwu, na-achọ mmekọahụ, iwe a mgbawa na ha n'ubu banyere ha bụbu, e kụrụ ihe jọrọ njọ mkpisi wee foto-shopped ha foto ka ha na-ele anya dị ka ihe nlereanya ma ọ bụ na ha bụ ndị dị nnọọ larịị akụ! Ọ bụrụ na na na ada ụda ike ọ na-adịghị pụtara na, na na bụ n'ezie otú ọ pụrụ isi na-eche mgbe ụfọdụ n'ụwa nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-jaded! N'ụzọ dị mwute a nile nwere ike ime ka ị na-eche na ike gwụrụ, nkụda mmụọ na ọkụ si. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ pụrụ ọbụna ime ka ị na-ajụ ma na e nwere onye si n'ebe unu!
Na kasị bụrụ na m mara ndị mmadụ nditop ke towel kpamkpam, ikwusa na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-adịghị na-arụ ọrụ, ma ọ bụ na ọ bụ nanị n'ihi na weirdos, ma ọ bụ ihe ọ bụla version nke akụkọ ị na-agwa onwe gị. Lee, m na-ekwu ọ na-adịghị obi ọjọọ mgbe o yiri ka unu na-enweta otu onye ndakpọ olileanya mgbe ọzọ, Otú ọ dị ihe nwere ike ime ka ndị niile dị iche ebe a bụ obere mgbanwe na anya – dị nnọọ ntakịrị 'tweak' ka oghere site na nke ị na-online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị.
Ihe ị ga-echeta ebe a bụ na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ga-emepe gị 'lekwasịrị ahịa', nke pụtara na ọ bụ ọtụtụ ibu karịa ọ gaara azụ mgbe mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-eji na-ewere ọnọdụ n'etiti nnọọ ndị ikom na ndị ladies si n'ógbè gị gburugburu ebe. Ma na nke a pụtara na ị na-aga izute niile dị iche iche nke ndị mmadụ. Ọ bụghị ha niile na-aga na-abụ gị ụdị ndị, na ị ga-ọ bụghị mgbe niile ha ma. Nke a na-emetụta gị n'agbanyeghị otú magburu onwe unu bụ ndị na na ole nke a catch i nwere ike ịbụ. Na ụwa nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọ na-adịghị eme ka ọtụtụ ihe dị iche, e nwere nnọọ a ụfọdụ ego nke 'siri ike ma daharia'. Na eleghị anya na a ụfọdụ 'olu' nke ndị i nwere ike izute tupu ị na-izute 'onye', (ma ọ bụrụ na ị bụ nnọọ kechioma). Na-echeta ihe bụ otu onye ahụ ahịhịa bụ ihe ọzọ na-akụ. The nsogbu abịa mgbe anyị dum ihe n'otu n'otu.
The ọzọ ihe na-echeta bụ na mgbe anyị na-akpa na ndị agadi gaferela ụzọ, ie nzukọ ndị ihu na ihu, anyị ga-emekarị mara a ntakịrị banyere ha mbụ, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị ihe ha na-ele anya dị ka na ndụ n'ezie. Otú ọ dị na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na unu adịghị, ya mere na ị na-aga na-abịa gafee nza nke ndị mmadụ ị ga-enweghị họọrọ ka ụbọchị ọ bụrụ na i zutere ha na onye. Ọbụna na-agụ profaịlụ na-agaghị enye gị ọtụtụ echiche, n'ihi na mgbe niile, ndị mmadụ na-ewetara naanị na ha na kasị mma n'akụkụ ha profaịlụ. Ka-eme ihe n'eziokwu, ọ bụ eleghi anya na onye ọ bụla ga-dee 'keiwe oku, ọdịmma onwe onye nanị narcissist na halitosis na ubé receding ntutu na-achọ mma nwaanyị na-esi nri ya dinners ya '.
Ya mere, ọ bụ pa N'ezie na ị ga-ezute ụfọdụ ndị na ị ga-ahọrọ iji zere dị ka ọrịa. Ma ụfọdụ na ị bụ nnọọ mmasị na. Ụfọdụ ga-agaghị enwe mmasị na gị. Ụfọdụ ga-iyi mmasị na mgbe ahụ na-apụ n'anya. Ọ bụrụ na ị pụrụ ịnakwere na ihe a nile bụ akụkụ na ngwugwu na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị mgbe ahụ ị ga agaziri a otutu mma. N'ụzọ dị otú ahụ ị pụrụ nanị ọchị, na-achị ọchị onwe gị na-ekwu na 'OZ'. Ahụ ga-esi nri azụ ịnyịnya.
Unu ga-esi wutere. Mee nke a obere tweak gị àgwà banyere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị online, ahụ ga-esi si n'ebe na nwere ụfọdụ fun mmekọrịta na nza nke ndị dị iche iche. Nkata, achụ nwoke, na-aga na ụfọdụ ụbọchị, onwe gị obi ụtọ, na onye maara, ikekwe gị 'onye' dị gburugburu ọzọ n'akụkụ.